Intuit TurboTax Inoita iyo IRS Kutaridzika Kunaka | Martech Zone
Svondo, Kurume 4, 2007 Svondo, Kurume 4, 2007 Douglas Karr
Strike One… nhasi raive zuva remutero. Ini ndanga ndisiri kunyatsotarisira kuita mitero yangu, asi ini ndoda kuitisa kuti ipedzwe nenguva yakawanda yasara. Kuva nebhizimusi renguva pfupi (iro parizvino rinorasikirwa nemari) kunoita kuti kuchengetedza zvinyorwa kuve kwakakosha uye ini ndinovenga zvinyorwa. Saka ini chaizvo ndine kabhodhi yefaira yandinosundira manotsi, maresiti, uye matanda emireji mukati. Zvino, kana nguva yemutero yasvika, ini ndinochera kunze kwemaforodha ese uye ndonyatso kuronga zvese zviri muchiitiko pane kuongororwa munzira.
Muna 2005 ndakasiya bhizimusi repadivi nekuti zvaive zvakaoma. Zvisinei, gore rino masevhisi angu anga achinyanya kudiwa nekuratidzwa kwakanyanya… asi, chokwadi, kwete mari yakawanda. Izvo zvakanaka ... zvakaverengerwa uye zviri kushanda. Ini ndaisarudza zvakanyanya saka mambure acho ndeekuti ndakashandisa zvakawanda pabhizimusi rangu kupfuura zvandauya nazvo. Chinangwa changu chinowanzo kupaza, asi ini ndaive nebhuru account yakandiisa pasi.
Zvisinei ... ndakaronga kupera kwesvondo kuita mitero ivo vana vachienda kunoshanyira Amai vavo. Sezvo rombo rakanaka rinazvo, izvo zvakanzurwa zvakare. Rova maviri.
Ini ndakapinda paTurboTax kurodha pasi software uye ndikafunga kuti ndaive mudambudziko…. pane peji reakaundi rangu ini ndanga ndaraira-2006 TurboTax Imba & Bhizinesi Shanduro. Asi yaive yeWindows uye ini zvino ndave neMac. Rova vatatu?
Ini ndakapinda muwebhu vhezheni yesoftware ndichifunga kuti nderudzii rweapp randaizowana. Mukomana, ndakanga ndiri mune kushamisika kunofadza. Zvaishamisa chose. Iko kushandiswa kweiyo online software yaive yakakwana… kuruboshwe padivi yaive pfupiso uye kurudyi kwaive nerumwe rubatsiro. Pakati pepaneru, iko kushanda kwakashanda mushe. Ini ndakakwanisa kufamba neshure, ndichisvetuka zvikamu, kusvetukira kumashure… uye handina kumbove nenyaya.
Pandakatanga ini, ini ndanga ndichimhanya paPanoenderana sezvo ndaifunga kuti ndingangoda kurodha pasi software. Pakanga pasina chikonzero. Inenge hafu-nzira kuburikidza nekuita yangu mitero, zvakadaro, IE7 yakasarudza kutora dump (hazvishamise). Ndainetsekana kuti ndinogona kunge ndakarasa imwe info asi pandakapinda ndichishandisa Firefox, handina kana kumborohwa. TurboTax inoponesa paunenge uchienda.
Zvimwe zvinhu zvikuru… ndinogona kupinza yangu yemitero ya2005 kuti nditange musoro. Zvakare, ini ndakakwanisa kurodha pasi rese rangu W-2 dhata kubva kuADP muTurboTax's app. Ini ndakatumira pamagetsi, ndiri kudzoreredzwa zvakanyatsoiswa, ndakawana maemail maverts kana vanga vagadzirira kutenderwa, uye ndichawana imwe kana yangu yekudzoserwa yaiswa - anofungidzirwa mazuva gumi nepfumbamwe.
Zvese mune zvese, Intuit yakaita zuva rangu. Chikumbiro chinogona kuita mushe kubva mutero yekodhi yedu chinoshamisa zvinoshamisa. Kunyange Mutungamiri Bush rinoti:
Iyo kodhi yemutero inonetsa yakaoma. Unoona, rakareba mapeji miriyoni.
Ndatenda, Intuit. Ndanga ndichishandisa TurboTax kweanenge makore masere ikozvino uye ndinofunga Intuit inogona kunge iine mutengi wehupenyu hwese (chero bedzi vasingabvise yavo yekushandisa nyanzvi!) TurboTax inoita iyo IRS tarisa zvakanaka. Ini ndinoshamisika kana mutero wehurongwa uchazombogadziridza sekureba ivo vaine tarenda rakadai pakutora yakaoma yakaoma uye nekuronga kuti ive inonakidza seyi application.
Kune avo vanhu vanofunga kuti desktop desktop hazvigone kufamba online, ingoita yako mitero na TurboTax Pamhepo. Changu chete kuora moyo nehurongwa hwese ndepandakafunga kuti ndakaita shoma gore rino kupfuura gore rapfuura. Ugh. Uye Mwanakomana wangu akatendeuka 17 saka handichamutorere $ 1k mutero wechikwereti kwaari.
Mar 5, 2007 pa 7: 26 AM
Ini ndanga ndiri fan weTurboTax (desktop edition) kwemakore akati wandei zvakare. Iyo online online inobata sei yakawanda mutero inodzoka? Ndokunge, iwe unofanirwa kubhadhara pamutero kudzoka?
Rangarira makore mashoma apfuura apo Intuit yakashandisa chigadzirwa kugadzirwa kumisa kuwanda kwakawanda kubva kuCD rimwe? Inonzwika zvakanaka pabepa, asi zvakatsamwisa mhuri dzese (vakaroora) vaitarisira kuzokwanisa kubhadhara mitero kubva kumakomputa avo. Ndinovimba iyo online vhezheni inochinja mune izvi.
Mar 5, 2007 pa 8: 36 AM
Kuti ndikuudze chokwadi, handina chokwadi! Ini chete (nekutenda) ndaive nemumwe wekushushikana nezvazvo. Handifunge kuti ndinodzokera kudesktop mushure mekushandisa iyo online! Kwete kuiswa, uye data rangu rese rinowanikwa online kubva pano zvichienda mberi! (Iwe unokwanisa kusevha ako ese mafomu emitero kuburikidza nePDF kuti uwane rekodhi).
Mar 5, 2007 pa 6: 26 PM
Ndakafara kwazvo kuverenga nezve yako yakanaka chiitiko neTurboTax gore rino. Kutenda nekuve akavimbika mutengi! Ndakagovana yako posvo nevamwe vevagadziri vedu zvakare sezvo ndine chokwadi kuti vachanakidzwa neiyo kudos.
Kushambadzira Manager, TurboTax
Mar 5, 2007 pa 10: 16 PM
Ndatenda nekusiya kwako katsamba kerudzi uye ndinofara kuti wakazvigovana!
Mar 7, 2007 pa 9: 47 PM
Shamwari, ini ndanga ndichishandisa TurboTax Online kubvira muna 2001. Kana iwe ukaishandisa gore rinouya, rinodhonza iyo data kubva gore rino kupinda muakaunti saka haufanire kudzoka zvakare kuisa zvakare zvinhu. Ivo zvakare vanochengeta ese ako ekare anodzoka online. Ini handizoshandisa chero chimwe chinhu.